Shina: Ny Drafitra Iadiana Amin’ny Harona Plastika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2017 3:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, فارسی, English
(Marihina fa tamin'ny 02 Jona 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanomboka nanan-kery tamin'ny 1 jona 2008 ny drafitra nasionalin'ny governemanta Shinoa izay nanova ny harona plastika ho andoavam-bola sy mandràra ny famokarana ny harona plastika tena manify. Tokony ahafahana mitahiry barikan-tsolika miisa 37 tapitrisa isan-taona ho an'i Shina ity drafitra ity. Nanara-maso akaiky ity tetikasa ity ny ONG ary niady handrara ny harona plastika. Mampiasa harona plastika miisa 3 lavitrisa isan'andro ny Shinoa.
Niparitaka manerana izao tontolo izao ny fandraràna harona plastika tao anatin'ny roa taona, tany San Francisco, Angletera, ary tany an-kafa. Noraisina ihany koa ny fepetra mitovy amin'izany tamin'ny taon-dasa tao an-tanàndehiben'i Shenzhen, any atsimon'i Shina. Dimy taona lasa izay, nandràra ireo harona plastika mba hiadiana amin'ny 白色污染 (“fandotoana fotsy” na ny fandotoana avy amin'ny plastika) nahitana vokatra mahabe fanantenana.ny tanàndehibe Shinoa iray ao amin'ny faritanin'i Yunnan .
Efa nafana ny adihevitra momba ny harona plastika hatramin'ny nanambarana ny drafitra tamin'ny volana Janoary tao amin'ny bilaogy sy ny sehatra fifanakalozan-kevitra Shinoa natokana ho an'ny tontolo iainana. Maro ny mpisera no nankasitraka ilay drafitra, ny hafa kosa dia nanakiana kokoa. Ireto ny sasantsasany tamin'ireo adihevitra :
Hoy ilay bilaogera Liu KenPeng tao amin'ny Sina.com raha nanoratra hoe:
Tena afa-po tokoa aho rehefa nahare ny vaovao!
Tamin'ireo tantaran'ny famoronana ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'ny Olombelona, ​​ny harona plastika no tena ratsy indrindra tamin'ny ratsy indrindra. Ny tena mampanahy indrindra dia ny tsy mety hanjavonany mihitsy ao anatin'ny natiora.
Ny hafa kosa nisalasala momba ny fampiharana ilay drafitra. Nanoratra tao amin'ny Baidu.com ny mpaneho hevitra iray:
Tena olana lehibe izany ary ho sarotra ny fampiharana ilay drafitra.
Hampihena ny fandaniana ao an-tokantrano amin'ny fomba fijeriny ny mpanjifa ary hisy fiantraikany eo amin'ny tombombarotra tsenambarotra. Afaka maminavina fanomezana harona plastika maimaim-poana ireo mpivarotra tsy tompon'andraikitra. Hirotsaka amin'ny tolotra Ireo mpanjifa, indrindra ireo tsy mahafantatra ny olana ara-tontolo iainana. Ny politika dia zavatra iray, kanefa manana ny paikadiny manokana ny olona ary tsy ho tratra ny tanjona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana .
Nanoratra i Qianyuyu, tao amin'ny Bjelf.com, sehatra fifanakalozan-kevitra ao Beijing momba ny lalànan'ny tontolo iainana hoe:
… tsara kokoa ny mametra ny fampiasana harona plastika noho ny fampandoavam-bola ny fampiasana azy ireny. Hividy harona plastika any amin'ny magazay lehibe manomboka amin'ny volana Jona ny mpanjifa. Manontany tena aho raha nanao fanadihadiana tamin'ny vahoaka momba ity politika ity ny governemanta. Nidangana be ny vidim-piainana tamin'ity taona ity. Hanasazy ny mpanjifa tsotra ny vidin'ny harona . Manontany tena aho raha tena nieritreritra an'izany ny governemanta. Nahoana no tsy mampiasa ny politikan'ny famerana izy ireo? Ohatra, afaka mahazo harona plastika maimaim-poana ny tsirairay, fa tsy maintsy mandoa vola amin'ny faharoa. Hanome tombony fotsiny ho an'ny mpivarotra ny harona plastika handoavam-bola. Ny tena ilain'ny mpanjifa ihany no hovidiany ao amin'ny toeram-pivarotana. Ny toeram-pivarotana ihany no hahazo tombony amin'ny vidin'ny harona .
Ao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra Baidu.com, manontany tena ny hafa raha toa ka hanova zavatra ny vidin'ny harona plastika :
1- 3 mao fotsiny ny vidin'ny harona plastika 1, kely loatra, tsy hisy ny vokatra hita maso.
Mitentina 1 RMB ny telo amin'ny mofo andrahoina amin'ny etona. Ankehitriny lasa 1RMB ny roa. Lazao ahy raha nanova zavatra izany.